Indawo yokuhlala yasePruamare Marina di Ravenna Int. 10 - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yasePruamare Marina di Ravenna Int. 10
Amagumbi amagumbi amabini anamhlanje imizuzu emi-5 ukusuka elwandle eMarina di Ravenna, iibhedi ezi-4, zixhotyiswe ngokupheleleyo.
UKUGCINWA KWEZINDLU NOKUTSHATYISWA NGE-OZONE NGALO LONKE UTSHINTSHO LWEENDEKWI.
Kwisakhiwo esitsha esakhiweyo, sirenta amagumbi amabini anamagumbi amabini agcweleyo eMarina di Ravenna, ukuhlala ngeveki / ngenyanga.
Amagumbi anamagumbi amabini abekwe kumgangatho wokuqala kunye nowesibini, anegumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini zesofa kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-anteroom enomatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokulala eliphindwe kabini, i-terrace enkulu, indawo yokupaka evaliweyo, umoya womoya. kuwo onke amagumbi. amagumbi, wi-fi.
Iilwandle zaseMarina di Ravenna zimalunga neemitha ezingama-400, ngoko zinokufikelelwa ngokulula ngeenyawo okanye ngebhayisekile. Kumgama weemitha ezimbalwa uya kufumana zonke iinkonzo eziphambili ezinje ngeebha, iindawo zokutyela, iivenkile zazo zonke iintlobo.
I-Marina di Ravenna yayiyindawo yokuqala yokuphumla elwandle kunxweme lwaseRavenna ezinikele ngokupheleleyo kukhenketho ukusukela ngeminyaka yoo-1930. Namhlanje izivezile njengendawo yokuphumla eguquguqukayo kunye nefashoni, ineeklabhu kunye neendawo zokuhlambela kunye nombutho wabakhenkethi-wehotele onamava kunye nesiko, okwaziyo ukutsala uninzi lweentsapho kunye nolutsha ngexesha lasehlotyeni. Intywiliselwe kuhlaza lwehlathi elishinyeneyo lompayina eliselunxwemeni, idolophu ikwaxatyiswa ngokutya kwayo okusekwe kwintlanzi.
Nendawo yamkele izibuko kubakhenkethi lomzi Ravenna, Marinara, izibuko ekwaziyo entsonkothileyo umsondezo malunga 1500 Zase izikhephe ukuya ku 30m, bakhuselwe kakuhle yi-maza ezimbini 2.8 km elide eziqinisekisa sengqiqweni kwayo nayiphi na imeko. Zemozulu. Enkosi kwizibuko layo, iMarina di Ravenna ithandwa kakhulu ngoomatiloshe, abakhuphisana apha kwii-regattas ezibalulekileyo unyaka wonke.
Malunga neekhilomitha ezili-12 ukusuka elunxwemeni kukho indawo ebalulekileyo yokhuseleko lwebhayoloji ebizwa ngokuba yiPaguro, indawo ehlala intlanzi, ezalwe kwintsalela yeqonga lokomba, elihlala izilwanyana ezikhethekileyo kunye neefom zezityalo, indawo yokuya kubaphandi kunye nabahlukahlukeneyo. iqhagamshelene ngokusondeleyo yiMyuziyam yeSizwe yeMisebenzi yaNgaphantsi kwamanzi, okwangoku eyona nyani yokuqala nekuphela kwayo e-Itali.
Asihlali kwisiza kwaye sihlala sikhona kulo naluphi na uhlobo loncedo. Nceda uhlale ucebisa ngexesha, ubuncinane ngosuku olungaphambili, ixesha lokungena, ukuze sikwazi ukukwamkela ngaphandle kokulinda okungathandekiyo. Izitshixo ziya kunikezelwa ngokobuqu.
Asihlali kwisiza kwaye sihlala sikhona kulo naluphi na uhlobo loncedo. Nceda uhlale ucebisa ngexesha, ubuncinane ngosuku olungaphambili, ixesha lokungena, ukuze sikwazi ukukwamkela…